I-Spiro: Ukuzibandakanya okuThengisiweyo okuSebenzayo usebenzisa i-AI | Martech Zone
USpiro isebenzisa ubukrelekrele bokufakelwa ukunika iinkokheli zakho zentengiso ukuqonda okunokwenzeka kunye nabameli bakho bokuthengisa izindululo ezisebenzayo ze Amanyathelo alandelayo alandelayo ukunceda ukuthintela amathuba alahlekileyo kunye ukwandisa imveliso yokuthengisa.
Abathengi bakwaSpiro baxela iziphumo ezimangalisayo, kubandakanya:
Ukukwazi ukuqokelela Amaxesha ali-16 ngaphezulu kwedatha
Isakhono sakho okanye seqela lakho lokuthengisa fikelela kuma-30% amathemba angaphezulu kwangexesha elifanayo.
Ukukwazi vala ukuthengisa okungaphezulu kwama-20% nezahlulo
Izibonelelo zeSpiro zibandakanya
USpiro wazisa indlela entsha yokuthengisa ngokuzenzekelayo: ulawulo lwentsebenzo olusebenzayo.
Gxila kwimisebenzi yeqela -Umncedisi we-Spiro ubonelela abasebenzisi ngokoluhlu lwemihla ngemihla lwe-AI kunye nemisebenzi eyenziwe ngumsebenzisi eyandisa imveliso.
Yandisa imveliso yeqela -Ukwakhiwa kweVoIP eyakhelweyo kunye noluhlu lweefowuni olwenziwe nge-AI luvumela amaqela ukuba afikelele kumathuba amaninzi, kunye nokuloba ngokufowuna okuzenzekelayo kukonyusa ukusebenza kweqela.
Qinisekisa ukubandakanyeka okusebenzayo -U-Spiro ubonelela ngezikhumbuzi ezilandelelweyo ngokulandela iincoko zokuqinisekisa ukuba akukho sivumelwano sityibilika ngokutyhoboza.
Ukukhawulezisa ukuqhubela phambili kwesivumelwano -U-Spiro uhlalutya amanqaku okuzibandakanya kwaye ujolise ekujongeni amathuba anokuvalwa.
Nyusa amaxabiso okuphumelela -U-Spiro ubonelela ngokubonakalayo okupheleleyo kwemibhobho kunye nokuqonda okusebenzayo ukunceda ukuthintela ukuthengisa okulahlekileyo.
Uqikelelo lweNtengiso -I-Spiro ibonelela ngokubonakala ngokupheleleyo kumbhobho wakho kwaye yabela amanqaku okuzibandakanya ekuphuculeni ukuchaneka.
I-Spiro ayithathi indawo yesixhobo sokuthengisa esizenzekelayo (endaweni yoko, bayadibana kunye nezixhobo), kodwa ungathumela ii-imeyile ezilungelelanisiweyo kuluhlu ekujoliswe kulo ngoonxibelelwano abangama-500, ngokwazi ukubacwangcisela ixesha nomhla wexesha elizayo.
Cwangcisa iSpiro Demo
Enkosi ngokukhethekileyo kuSheryl e IKhabhinethi M. ukufumana!
tags: aiikhabhinethiukwanda kwezahluloukwanda kwentengiso kuyavalwaIntengiso ephumayouthethathethwano lokuzibandakanya kwintengisoUkunika amandla ukuthengisaukuzibandakanya kwintengisoumsebenzi weqela lokuthengisaImveliso yeqela lokuthengisaispiroivop